४९ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको प्लेन दुर्घटनामा यस्तो भनेका थिए पाइलटले (अडियोसहित) - Ekata News
४९ जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको प्लेन दुर्घटनामा यस्तो भनेका थिए पाइलटले (अडियोसहित)
एकता न्यूज / फाल्गुन २८, २०७४ - सोमवार
काठमाडौं – काठमाडौंमा दुर्घटनामा परेको बंगलादेशी विमानलाई चालकले उत्तरतिरबाट अवतरण गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमान प्रायः दक्षिणतर्फ अर्थात कोटेश्वरतिरबाट अवतरण गराउने भए पनि दुर्घटनामा परेको विमानलाई भने चालकले उत्तरपट्टि अर्थात जोरपाटीतर्फबाट अवतरण गराएका थिए ।
‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटिसीले विमानलाई दक्षिणबाटै अवतरण गराउन भने पनि चालकले उत्तरतिरबाट अवतरण गराउछु भने छन्’ विमानस्थलका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले भने ‘त्यसपछि एटिसीले उत्तरतिरबाटै अवतरण गराउन अनुमति दिएको जानकारी पाएको छु ।’ कुराकानीमा पटक-पटक एयर ट्राफिकले गलत दिशाबाट अवतरण नगराउन पाइलटलाई सावधान गराएका छन् ।
विमान उत्तरतिरबाट अवतरण गरेकै कारणले दुर्घटनामा परेको भन्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ३३ नेपालीसहित ७१ जना सवार विमान अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट चिप्लिएर नजिकैको फुटबल मैदानमा पुगेर आगो लागेको थियो ।
दुर्घटनामा परेको युएस बंगला विमानमा रहेका ६७ यात्रुमध्ये २२ नेपाली यात्रुको नाम यकिन भएको र ११ नेपालीको पहिचान खुल्न नसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त विमानमा ३२ बंगलादेशी तथा एक एक चिनियाँ र माल्दिभ्सका नागरिक सवार थिए ।
कुन देशका कति यात्रु थिए ? कहाँ उपचार भइरहेको छ ?
विमान दुर्घटनामा परेका २५ यात्रुलाई केएमसी अस्पताल पुर्याइएको छ । पिंकी धामी, समिना बज्राचार्य, इमरन कबिर, कविर हुसेन, रसिद हुसेन, मेहन्दी हसन, रिजना अब्दुल्ला, डा इरजना, धीरेन्द्रसिंह पूजना, स्वरना, सहरिन अहमद र एमडी सैनको केएमसी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
केएमसीमा मृतक घोषणाा
उपचारका लागि लगिएकामध्ये आठ जनाको निधन भएको चिकित्सकले घोषणा गरेका छन् । अस्पतालले मृत घोषणा गरेका यात्रुमा हरिशंकर पौडेल, रकिबूल हुसेन, पृथुला रसिद महिला (चालक दल) र खवाज हुसेन( चालक दल), प्रवीण चित्रकार, सजना देवकोटा र परिचय नखुलेका अन्य दुई यात्रु छन् ।
अन्य अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरु
यात्रुहरु किशोर त्रिपाठी र हरिशंकर सुवेदीलाई ग्राण्डी अस्पताल टोखामा सिफारिस गरिएको छ । घाइते दयाराम ताम्राकारलाई न्यूरो अस्पताल र केशव पाण्डेलाई मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ । केएमसी अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा दामोदर पोखरेलका अनुसार २५ घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।
नर्भिक अस्पतालमा वसन्त बोहरा, सनम शाक्य, आशिष रञ्जित, विनोदराज पौडेल र एक बंगलादेशीको उपचार भइरहेको छ । अस्पताल परिसरमा आफन्तजनको भीड लागेको छ । अस्पतालमा ल्याइएका घाइतेमध्ये दुईको अवस्था चिन्ताजनक छ ।
दुर्घटनाग्रस्त युएसबंगलामा सवार नेपाली यात्रुहरुको नामावली
बालकृष्ण थापा, ज्ञानुकुमारी गुरुङ, प्रशन्न पाण्डे, अवदेशकुमार यादव, श्रिया झा, सञ्जय महर्जन, सन्जय पौडेल, अन्जली श्रेष्ठ, निगा महर्जन, कृष्णकुमार साहनी, प्रिन्सी धामी, आस्ना शाक्य, चारु बराल, अल्गिना बराल, सरुना श्रेष्ठ, समिरा व्यञ्जनकार, सोविन्द्रसिंह बोहरा, माली महर्जन, श्वेता थापा, पुर्णिमा लोहनी, विनोद राज पौडेल, केशब पाण्डेय, सनम शाक्य, हरीप्रसाद सुबेदी, दयाराम ताम्राकार, हरिशंकर पौडेल